पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली बारे ग्राहकहरुको भ्रम, नेपाल टेलिकमले यसरी स्पष्ट पार्यो - Technology Khabar
» पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली बारे ग्राहकहरुको भ्रम, नेपाल टेलिकमले यसरी स्पष्ट पार्यो
Technology Khabar ८ बैशाख २०७७, सोमबार
नेपाल टेलिकमले आफ्नो पोस्टपेड मोबाइलको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धमा ग्राहकहरुमा केहि भ्रम रहेको भन्दै सो बारेमा स्पष्ट पारेको छ।
टेलिकमले अनबिल्ड अमाउन्ट, ड्यू अमाउन्ट, क्रेडिट लिमिट रेन्टल चार्जलगातका विषयमा ग्राहकहरुलाई जानकारी प्रदान गरेको हो । पछिल्लो दिनहरुमा टेलिकमले आफ्ना पोस्टपेड मोबाइलका ग्राहकहरुको अनावश्यक शुल्क काटेको भन्दै सामाजिक संजालहरुमा आलोचना भएपछि टेलिकमले सो बारेमा भ्रम परेको भन्दै स्पष्ट पारेको जनाएको छ ।
पोस्टपेड बिलिङमा ग्राहकले गरेको प्रत्येक कल बराबरको रकमलाई अनबिल्ड अमाउन्ट (Unbilled Amount) को रुपमा लेखांकन गरिन्छ र महिनाको अन्त्य (सामान्यतः अंग्रेजी महिनाको १५ तारिख) मा मात्र बिल तयार गरिन्छ । बिल तयार भइसकेको तर ग्राहकले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमलाई अनपेड बिल (Unpaid Bill) भनिन्छ । उदाहरणको लागि मार्च २२ मा ९८५१०००००० को अनपेड बिल रु. १४२५ छ भन्नाले यस ग्राहकले मार्च १४ सम्म (फागुन महिना वा सो भन्दा अघि) को बिलमध्ये रु. १४२५ भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने बुझाउँछ ।
सेवा प्रयोग गरेवापत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रकमलाई ड्यू अमाउन्ट (Due Amount) भनिन्छ । ड्यू अमाउन्ट भनेको अनपेड बिल र अनबिल्ड अमाउन्टको योगफल हो । उदाहरणको लागि माथिको ९८५१०००००० नम्बरको ग्राहकको मार्च २२ का दिनमा ड्यू अमाउन्ट रु. १६७३ (रु.१४२५ + रु.२४८) हुन्छ । आफ्नो यो सबै बिलिङ रकमको बारेमा जानकारी लिनका लागि *४००# डायल गर्न सकिन्छ । यसरी कल गर्दा आउने एसएमएसमा देखिने अभाइलेबल क्रेडिट (Available Credit) चाहिं अब ग्राहकले प्रयोग गर्न पाउने रकम हो ।
पोष्टपेड मोबाइलका लागि मासिक रुपमा न्यूनतम रु. ३८३.०७ रेन्टल चार्ज (Rental Charge) तय गरिएको छ । यसको अर्थ ग्राहकले यो भन्दा थोरै रकमको सुविधा प्रयोग गरेपनि रु. ३८३.०७ तिर्नै पर्छ । यद्यपि कम्पनीले उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) अफर वा अन्य विशेष अफर लिएका ग्राहकहरुको हकमा भने यो रकम फरक हुनसक्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै सुविधा उपयोग गर्ने भएकाले यो व्यवस्था पहिले देखि नै गरिएको हो । मासिक रुपमा यो भन्दा धेरै रकम प्रयोग गर्नेहरुले क्रेडिट लिमिट बढाउँदा राम्रो हुन्छ ।
यही रेन्टल रकमबाटै सामान्य रुपमा फोन गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन पाइन्छ । तर पोष्टपेड प्याक बाहेक अन्य छुट्टै प्याक किन्दा थप पैसा तिर्नुपर्छ । पोस्टपेड प्याक लिनका लागि *१४१५*२# डायल गरी आफूलाई उपयुक्त प्याक खरिद गर्न सकिन्छ ।
पोस्टपेड मोबाइल बिलको जानकारी लिनका लागि *४००# डायल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइटमार्फत https://gsmbl.ntc.net.np/ बाट र कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । कम्पनीको एपबाट पनि आफूले प्रयोग गरेको पछिल्लो ५ दिनसम्मको सबै बिलको रेकर्ड (Detail Bill) समेत हेर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको पोस्टपेड मोबाइलमार्फत गरिने कलको दर प्रिपेडको तुलनामा सस्तो हुनुका साथै अन्य विभिन्न सुविधा समेत यसबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट प्रयोग गरिने पोस्टपेड प्याकेज र अन्य विभिन्न सुविधाका साथै प्रयोग गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व बढाउनमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको कम्पनीको दाबी छ।
प्रकाशित: ८ बैशाख २०७७, सोमबार
साथीलाई फेसबुकको म्यासेन्जरमार्फत अश्लिल भिडियो/फोटो पठाउने एक पक्राउ